Iivesi ezili-14 zebhayibhile zabaselula bamaKatolika | Iingcebiso ezinamandla?
Ukuba mncinci kwaye uzibandakanye nomsebenzi weNkosi yinto exabiseke kakhulu, ngakumbi kula maxesha apho yonke into ibonakala inzima kakhulu. Ulutsha luhlala lutshintsha kwaye kubalulekile ukuba luzazi Iivesi zeBhayibhile zabaselula abangamaKatolika ukuba sinakho nanini na xa sifuna oko.
Izibhalo zamandla, inkuthazo, umzekelo kunye nezibongozo ezikhethekileyo kubantu abancinci abagqibe kwelokuba bayikhonze iNkosi. Zonke ezi zibhalo zigcinwe kwizibhalo ezingcwele kwaye kufuneka sinomdla wokulambela nelizwi lakhe, ukuba simazi ngokunzulu.
Namhlanje sidinga ulutsha ukuba lujongise iNkosi, sigcwele izono ezininzi kakhulu, zilahlekile kwiminqweno yehlabathi kwaye bambalwa kakhulu abo bathatha ixesha lokusondela kuThixo kwaye oku kufanele ukuba kungunobangela wokukhathazeka kuluntu lonke .
Ukuba ufuna ukusondela kuThixo kwaye ungumfana oselula okanye ukuba sele umkhonze kodwa ujonge igama elikhethekileyo kuwe, ngokuqinisekileyo ezi zibhalo ziya kuba luncedo kakhulu kusuku lwakho.
1 1. UThixo uyabaxhasa abancinci
2 2. UThixo usecaleni kwakho
3 3. Thembela kumandla kaThixo
4 4 Ulutsha luncedo lukaThixo
5 5. INkosi isikhusela sonke
6 6 UThixo ucebisa abancinci
7 7. UThixo usecaleni lethu
8 8. Hlala uhambe rhoqo ngokholo
9 9. Kholelwa kumandla kaKristu.
10 10. Yamkela ukholo entliziyweni yakho
11 11. Cela uncedo kuThixo xa kufuneka njalo
12 12. Ukholo l woyisa yonke imiqobo
12.1 13. UThixo ulithemba
13 Ndisoloko ndiseNkosini
1. UThixo uyabaxhasa abancinci
1 Samuel 2: 26 Waye uSamweli eselula akhula, wamkelwa emehlweni kaThixo naphambi kwabantu.
Kule ndinyana yebhayibhile sixelelwa ngomfana osakhulayo owayekhulele etempileni kuba umama wakhe xa wayezala wamnika eNkosini kwaye uSamuel njengomntwana wayesazi ukuba yintoni ukuba ngumkhonzi kaThixo. Ibali elingumzekelo kubo bonke abasebatsha abangama Katolika abagqibe kwelokuba bamkhonze uThixo kwasebancinci.
2. UThixo usecaleni kwakho
UMateyu 15:4 “Kuba uThixo wawisa umthetho, esithi, Beka uyihlo nonyoko; kwaye: Nabani na oqalekisa utata okanye umama, uza kufa engenakurhoxiseka ”
Oku kwaziwa njengomyalelo wokuqala ophethe isithembiso kwaye kuyathakazelisa ukuba awenziwanga kubantu abancinci kuphela kodwa kuwo wonke umntu ngokubanzi. Nangona kunjalo, abantu abancinci balifanele eli gama njengoko uninzi lwabo luhamba kumanqanaba anzima kwaye emva koko iNkosi ibashiya kunye neengcebiso kunye nesithembiso sobomi obude.
3. Thembela kumandla kaThixo
IZililo 3: 27 Kulungile ukuba umntu athwale idyokhwe kwasebutsheni bakhe.
Ulutsha kuThixo okanye kunokuba ngumthwalo kodwa kuyonwabisa ukumkhonza ngeentsuku apho amandla nomoya wethu ubonakala ngathi ulikhulu ekhulwini. Ulutsha lulungile kwaye ukuba siyaziphilela ukuluphila phantsi kwemithetho kaThixo kunye nemimiselo yokholo lwethu emva koko siyakuba nolutsha olusikelelekileyo ngawo onke amaxesha.
4 Ulutsha luncedo lukaThixo
1 kuTimoti 4:12 "Makungabikho namnye kuni ubutsha bakho, kodwa ube ngumzekelo wamakholwa kwilizwi, ihambo, uthando, umoya, ukholo kunye nobunyulu."
Amaxesha amaninzi ngokuba sisencinci kwaye sisithi sifuna ukukhonza ecaweni okanye sinikezele iintliziyo zethu kwiNkosi, asithathelwa ngqalelo kwaye, endaweni yoko, singunobangela wokuhlekisa, kodwa apha iNkosi inika ingcebiso kwaye isikhuthaza ukuba sithathe ezethu. isigqibo sokumlandela nokuba usemncinci.
5. INkosi isikhusela sonke
I-119 Psalms: 9 Umfana uya kuwuqaqambisa ngantoni na umendo wakhe? Ngokugcina ilizwi lakho. ”
Umendo we-Katolika oselula kunye naye wonke umntu oqhuba ukholo lwentliziyo, kufuneka acocwe rhoqo kuba uhlala ecekeceke kwaye ke siyakhubeka. Kule ndinyana uThixo usibuza umbuzo aze asinike impendulo yakhe. Ekuphela kwendlela yokucoca indlela yethu kukugcina ilizwi likaThixo.
6 UThixo ucebisa abancinci
Yeremiya 1: 7-8 "Kwaye uThixo wathi kum: Musa ukuthi: Ndiyingane; kuba uya kuyo yonke into endikuthuma yona, kwaye uya kuthetha yonke into endikuthuma yona. Sukoyika phambi kwabo, kuba ndiza kukukhulula, utsho uThixo ”.
Ukungakhuseleki kunokuziswa kuthi ngalo lonke ixesha, nokuba sibadala kangakanani kodwa xa sibancinci oku kungazithembi kubonakala ngathi kufuna ukuthatha ngaphezulu kweengcinga zethu. Kufuneka siqiniseke ukuba iNkosi ihamba nathi kuyo yonke indawo kwaye isikhokele ukuba senze izinto ngokuchanekileyo, iyasomeleza.
7. UThixo usecaleni lethu
1 kwabaseKorinte 10:23 Yonke into isemthethweni kum, kodwa ayisiyiyo yonke into efanelekileyo; Yonke into isemthethweni kum, kodwa ayisiyiyo yonke into eyakhayo ”.
Le ndawo yebhayibhile izama ukusixelela ukuba nangona singenza yonke into, kukutsho ukuba sinomnqweno kwaye amandla ukwenza yonke into nokuba ayilunganga, asinakuyenza kuba ayisihambeli. Sahlukile kuba sibekelwe bucala ubutsha bethu ukuba sikhonze uThixo.
8. Hlala uhambe rhoqo ngokholo
KuTito 2: 6-8 Ikwabongoza abantu abancinci ukuba balumke; ukuzizinika kuyo yonke into njengomzekelo wemisebenzi elungileyo; ngokufundisa ngokubonisa ingqibelelo, ubugqwetha, ilizwi elivakalayo nelingenakuchazeka, ukuze utshaba lungenazintloni, lunokuthetha into embi ngawe.
Isikhuthazo sokuba singadingi nje ubutsha kodwa nangayiphi na iminyaka. Isicatshulwa sebhayibhile onokuthi unikezele kumhlobo okanye usinike isalamane. Icacisa ngokucacileyo nangokucacileyo indlela esimele siziphathe ngayo kungekuphela ebandleni kodwa nangaphandle kwayo.
9. Kholelwa kumandla kaKristu.
IMizekeliso 20: 29 Ubuqaqawuli babancinci amandla abo, nobuhle bamadoda amakhulu bubudala babo.
Abantu abancinci, kwiimeko ezininzi, banamandla, bomelele, abanamandla kwaye aboyiki nto, kodwa abantu abadala kunye nento abayishiyileyo banandipha ubomi obulungileyo. Oku kunokwenzeka kuphela xa sinikezela iminyaka yethu elungileyo kwinkonzo yeNkosi kwaye sibanjwa yiminqweno yenyama.
10. Yamkela ukholo entliziyweni yakho
2 kuTimoti 2:22 Saba neenkanuko zobutsha, uqhubeke Ubulungisa, ukholo, uthando noxolo, nabo babiza iNkosi ngentliziyo ehlambulukileyo ”.
Izifiso zolutsha lutshaba olomeleleyo kwaye yiyo loo nto singakwazi ukuhlala sijongana nazo kodwa kufuneka sibaleke ngazo zonke ixesha. Mhlawumbi ukuba nokuziphatha okungathandekiyo kule meko kungunobangela wokuhlekwa kodwa yazi ukuba umvuzo uvela kuThixo hayi ebantwini
11. Cela uncedo kuThixo xa kufuneka njalo
I-Psalm 119: 11 Intliziyo yam ndiyigcinile intetho yakho, ukuze ndingoni kuwe.
Akukho nto ilunge ngakumbi kunokugcwalisa iintliziyo zethu ezincinci ngamazwi eNkosi. Ezi ntetho zifumaneka kwilizwi likaThixo kwaye kubalulekile ukuba sizithwale singene ngaphakathi kuthi ukuze xa sifuna ezo zibhalo okanye amazwi asinike amandla noxolo, ukongeza ukusigcina kude nesono.
12. Ukholo l woyisa yonke imiqobo
Kwabase-Efese 6: 1-2 Bantwana, bathobeleni abazali benu ngokwaseNkosini, kuba kufanelekile oko. Beka uyihlo nonyoko, wona lowo ngumthetho wokuqala onesithembiso.
Asikokuthobela nje kuphela abazali bethu kodwa nokuthobela uThixo, le yindlela yokuziphatha eqala ekhayeni lethu, xa uthobela abazali bethu uyalifeza ilizwi likaThixo kwaye uya kujongana nesithembiso sakhe. Kulungile ukuba sithobele abazali kunye noThixo, singaze siyilibale le nto.
13. UThixo ulithemba
I-Psalm 71: 5 "Ngokuba ulithemba lam, Nkosi yam, Yehova, Inkoloseko yam kwasebuncinaneni bam. "
Abancinci esizinikezela ekukhonzeni iNkosi, kungcono kakhulu. Ukuba nobomi esibunikwe nguThixo owasidalayo, osinike ubomi, ohamba nathi ngamaxesha onke kwaye osithandayo ngaphandle kwemeko lolona tyalo mali silwenzileyo. Ngamana angangamandla ethu kunye nethemba lethu ekubeni sibancinci.
Yoshuwa 1: 7-9 "Yomelela ukhaliphe kunene, ukuze ugcine ukwenza ngokomyalelo wonke, awakuwisela wona umkhonzi wam uMoses. Musa ukutyekela ekunene nasekhohlo kuwo, ukuze ube nokuphumelela kuko konke okwenzayo. Le ncwadi yomthetho ayisoze iphume emlonyeni wakho, kodwa uyakucamngca ngayo imini nobusuku, ukuze ugcine, wenze ngako konke okubhaliweyo kuyo; ngokuba ngoko uya kuyenza iphumelele indlela yakho, ibe konke kuya kukuhambela kakuhle. Jonga, ndikuyalela ukuba wenze umgudu kwaye ube nesibindi; Musa ukoyika okanye unkwantye, kuba uThixo wakho uya kuba nawe naphi na apho uya khona ”.
Isiluleko esigqibeleleyo ngokufanelekileyo kwaye sikhethekileyo esisimemo sokusigcwalisa ngamandla akho ukujongana nobunzima. Kufuneka sizabalaze kwaye sibe nesibindi, njengama Katolika aselula mininzi imiceli mngeni ekufuneka sijongane nayo kwaye kulapho ibhunga lithatha amandla. Masingadluli Iindlela zikaThixo Kuba inkampani yethu.
Dibanisa amandla ezi ndinyana zeBhayibhile kunye neengcebiso kubantu abaselula abangamaKatolika.
Funda kwakhona eli nqaku Iindinyana ezili-13 zokukhuthaza y Iivesi ezili-11 zothando lukaThixo.